TALO IYO TUSAALE – DADKA PUNTLAND | puntlandi.com
Sunday, December 22nd, 2013 | Posted by admin admin
TALO IYO TUSAALE – DADKA PUNTLAND
Waxaan bogaadin usoo jeedinayaa dhamaan dadkii reer Puntland ee isku taxalujiyey midnaanta iyo wanaaga umadda iyo dalka, qofkasta oo muwaadin ah isaga oo meeshiisa joogaa ayaa dalka xil ka saaranyahay, waxaan aaminsanahay waxkasta inaan ka raacno sharaf, midnaan, walaalnimo, wadaniyad, wadashaqayn badan iyo horumar. Haddii ay taasi dhacdo waxaan xaqiiqsan doonnaa in caruurteenu ay noqon doonaan ubad walidiin waaweyn oo reer Puntland ah.
Marka aan dib u milicsano sooyaalka taariikho dadyow aduunka ku nool, waxaan ka baran karnaa sida ay ku xaliyeen dhibaatooyin soo foodsaaray oo aad u ad adkaa kuwaas oo la soo darsay nidaamkii noloshoodu ahayd, maamul ahaan, dhaqaale ahaan, dad ahaan iyo xitaa xag iskaashi ama nabad galyo. Dadyowga maanta lagu kuunyo inay wax isbideen dhaqaale ahaan ama awood ahaan sida reer Galbeedka, ma jirin mabaa’dii (principles) xakamaysa dadka si loo ilaaliyo danaha guud ee bulshadaasi lahayd. Dadaalo loo galay darteed waxaa dhacday in sharuuc laga soo saaray habka wada dhaqanka bulshada iyo in la dajiyo hanaan maamul oo waxkasta lagu jaangooyo si dadka iyo deegaankoodaba loo xukumo.
Haddii aan soo qaato Puntland, habka uu dadku u wada noolyahay dalkuna ku dhaqan yahay waxaad moodaa in laga soo guuriyey dhaqan-maamuleedkii hore ee Soomaalida, waxaana meesha ka maqan aragtiyo aad maanta loogu baahanyahay in la dhaqan galiyo oo dowladanimoda la xiriira. Dowladnimodu maahan wax si fudud ku imaan kara ama magac ahaan iskaga jiri kara, haddii qoloba qolada ka danbaysa aysan usii rushayn wadadii ay mari lahaayeen si loo gaaro ujeedooyin umadda iyo dalkaba macno u samaynaya. Ciladdaha aan maanta dhibsanayo ee Puntland ka jira waxaan ugu abtirin karaa labo arrimood oo in la cadeeyo u bahaan isla markaasna ay lama huraan tahay in xal loo helo.
Masuul ay shaqadiisii fulinayaa dad kale: Waa qodob ka mid ah calaamadaha dadka danbeeya lagu yaqaano (One of the characteristics of underdeveloped societies), waxaa badanaa keena isla xisaabtanka oo yar iyo talada oo dad gaar ah lagu dabro
Hogaansan la’aan (Lack of proper adherence), guud ahaan qofka aadamiga ah waxaa laga doonayaa sadex waxyaalood oo kala danbaynta, nolosha fiican, dowladanimoda iyo hurmarkaba aad u caawiya oo kala ah
Qofku inuu u gaansamo sharciga ka jira meesha uu ku noolyahay, ka shaqaynayo ama noloshiisu ku xirantahay
Inuu canshuurta baxsho. Sidaa darteed waxaa loo baahanyahay hogaamiye isagu carbisan oo dadka u horseeda in la hogaansamo shaqadiisana ka bilaaba inuu hogaansamo. Hogaamiyihii hogaansama shacabkiisuna waa hanuunsamaa!!!!!!!!!!!
Shacabka: sida muuqata shacabka Puntland waa dad istaahila in la xukumo oo madax loo noqdo, waa dad ku fiican iskaashiga iyo shaqada waana dad aad u dhiir dhiiran (Warm people). Marka la eego qadiyadda Puntlandnimo waxaan aaminsanahay in dadka Puntland uu yahay dad dalkiisu kuwaynyahay, waxaa laga yaabaa inay jirto (B) Ilbaxnimoda oo hoosaysa (T) Aqoonta oo yar (J) Lama hanuuniyo (X) Dhiirgalin shaqo way yartay (Kh) IWM, hadda waxaa muuqata in dadkaani uu u baahanyahay in la maalo si dalka looga faa’iideeyo.
Dowlada shaqadeeda ka adag: wadanku wuxuu u baahanyahay hogaamiyaal fuliya shaqo dowladeed oo sax ah loona simanyahay, adeegyada dowlada oo ay cadaaladu ugu horayso hirgaliya.
Xildhibaan kasta waxaa uu wakiil ka yahay dadka tiradoodu aad u badantahay, waxayna ku codaynayaan afka Degmo ama gobol dadka ku noolka asaga ayaa matalaya, waxaa meesha ku jira in wakiiladu ay darsaan danta dalka iyaka oo aan qofna ku raali galinayn, dareenka iyo rabitaanka shacabka maadaama uu dadka matalayo. Anigu waxaan ahay shaqsi aad uga warqaba bulshada Puntland, xiligaan oo lagu jiro xaalad kala guur waxaa niyadda iyo carabka dadka aad ugu badan hadal haynta wakiilada, waxaadna moodaa ujeedadu tahay DAMIIRKA XILDHIBAANKA.
Damiirka Xildhibaanka: waa dhiiri galiyaha kaliya ee tilmaamaya in xildhibaanku yahay mid tixgalin gaar ah siinaya qofka uu doorashada kaalmayn doono. Kaliya waxay dalkaan dantu ugu jirtaa oo shaqadaan ka bixi kara ayaa cidda kaliya ee mudan in kaalmeeyo mar haddii uu masiirkii umadda gacantaada ku jiro Mudane Xildhibaan, waa aragti ka xoraysan (B) Damac (T) Laaluush oo sunta kaliya oo qofka damiirkiisa disha (J) ku taageerid koox ama qabiil oo ah wax aan marnaba xiriir la lahayn sida lagu gaari karo harumar iyo ujeedooyin qaran.
Waxaan u dardaarmayaa shacabka Puntland inaan dalkeena jeclaano, ilaalino midnimoda, kuligeena aan aamino in dalkaan ay masuuliyadiisu nasaarantahay
W/Q: Rooble Axmed Daahir